भारतीय नेतृ स्व.इन्दिरा गान्धीसँग जोडिएको एउटा रोचक प्रसंग,जुन करोडौ मानिसलाई थाहा छैन ! | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय नेतृ स्व.इन्दिरा गान्धीसँग जोडिएको एउटा रोचक प्रसंग,जुन करोडौ मानिसलाई थाहा छैन !
on: १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:०२ In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
एजेन्सी । भारतीय राजनीतिक रंगमञ्चमा नेहरु र गान्धी परिवार चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । यो परिवार विश्वभर चर्चिच परिवार हो । इन्दिरा गान्धी जवहरलाल नेहरुकी छोरी हुन् । नेहरुले नै भारतको सत्ता राजनीति गान्धी परिवारमा हस्तान्तरण गरेको इतिहास भेटिन्छ ।
इन्दिरा गान्धी जति राजनीतिमा दख्खल राख्ने महिला नेतृ थिइन्, उतिनै उनीभित्र व्यवहारिक कमजोरीहरु रहेका थिए । यो कुरा उनका नजिकै रहेर निकै वर्ष सहयोग गरेका स्वकीय सचिवले खोलेका छन् । एउटा पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गरिएको इन्दिराका ती कमजोरीका कारण विश्वभर हंगामा नै मच्चिएको थियो ।
यसरी खुलेको थियो इन्दिरा गान्धीको कमजोरी !
भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई आइरन लेडी पनि भन्ने गरिन्छ । उनकै कार्यकालमा पाकिस्तान टुक्रा पार्ने मिसन सफल भएको थियो । इन्दिराका पीता जवाहरलाल नेहरुका निजी सचिव थिए एम.ओ.मथाई । १९४६ देखि १९५९ सम्म नेहरुको साथमा रहेर मथाईले सहयोग गरेका थिए ।तर नेहरुका निजी सचिव इन्दिरा गान्धीका अति निजी बन्न पुगे ।
मथाईले एक पुस्तक लेखेका छन्, जसको नाम हो ‘रेमिनेन्सेन्सस अफ त नेहरु एज’ । जुन कितावमा नेहरु परिवारलाई मथाईले नंग्याएका छन् । ‘सि’ भन्ने च्याप्टरमा मथाईले इन्दिरा गान्धीसँग आफ्नो यौन लिलाबारे खुलेर लेखेका छन् । नेहरु परिवारप्रति मथाईले अगाध श्रद्धा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले नेहरु परिवारका सदस्यहरुको भित्री कुरा पनि लेखेका छन् । नेहरुको सम्बन्ध एडविना, पद्मजा नायडु, मृदुला सराभाइ र अन्य महिलाहरुसँग रहेको खुलासा गरेका छन।
नेहरु यी महिलाहरुसँग धेरै व्यस्त हुँदा देश नै भूल्थे । जसका कारण १९६२ मा भारत र चीन बीच भएको युद्ध चीनको पक्षमा गयो । मथाइले आफूले १२ वर्षसम्म इन्दिरा गान्धीसँग यौन लिला गरेको र त्यो क्रममा एकपटक उनी गर्भवती भएको लेखेका छन् । त्यो गर्भलाई पतन गराइयो उक्त पुस्तकमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
एकपटक इन्दिराले भनिन कि म तिमीसँग रातभर सुत्न चाहन्छु । मथाईले त्यसबेला उनलाई जवाफ फर्काएका थिए, ‘मलाई यस्तो अनुभव छैन ।’ त्यसपछि इन्दिराले मथाईलाई डा। अब्राहमको स्टोन एबाउट सेक्स र फिमेल एनाटोमी भन्ने दुई किताब दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि मथाईले भने कि म तपाईलाई केही कुरा भन्न आएको थिएँ । तर भैहाल्यो, पछि भन्ने छु । इन्दिरालाई कुनै एक पुरुषबाट यौन प्यास मेटिन्न थियो । जसका कारण उनी फरक फरक पुरुषसँग रमाउने गर्थिन ।
धीरेन्द्र ब्रम्हचारीसँगको सम्बन्ध देखेपछि मथाईले इन्दिरासँग सम्बन्ध तोडेका थिए, उनले उक्त पुस्तकमा रहस्य खोलेका छन् ।
विराटनगरवासीको एकै स्वर: ‘आश्वासन होइन विकास, डुबान होइन निकास’
१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:०२